ကြိုတင်မဲစောင့်ရှောက်မှုစီမံကိန်းစာရင်းမြန်မာ | Decide WNY
ဤသည်တိုတောင်းသောလမ်းညွှန်သင်ဘဝဆန္ဒကိုသင့်ရဲ့အဆုံးနှင့် ပတ်သက်. သင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားပြောနှင့်အတူစတင်ရန်ကူညီပေးပါမည်နှင့်သေချာသူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းစေရန်။ ဒါဟာကြိုတင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုစီမံကိန်းအဖြစ်လူသိများသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကြောင်းကောင်းစွာသင်မသိစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်သင်ဖို့နီးကပ်နေသောသူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အဆင့် 1: နားလည်မှုကြိုတင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုစီမံကိန်း
Your Life, Your Priorities သင်နှင့်သင့်ချစ်ရသူသင့်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုနှင့်ဦးစားပေးရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဂုဏ်အသရေကိုကူညီမယ့်စာအုပ်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။
Values Worksheet ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဦးစားပေးရည်မှတ်စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်နေသည့်အခါစဉ်းစားရန်မေးခွန်းများကိုပေးထားပါတယ်။
My Particular Wishes သင့်ရဲ့ဆရာဝန်, သူနာပြုသို့မဟုတ်အချို့သောတိကျတဲ့ကုထုံးသင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်၏အခြားစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအကြောင်းကြား။
Understand Your End-of-Life Options ရွေးချယ်မှုများအပြည့်အဝအကွာအဝေးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။
အဆင့် 2: သင့်တန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ကိုစူးစမျးခွငျး
တချို့လူတွေကသူတို့ကအရမ်းနေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့လျှင်သူတို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းအားကြီးသောထင်မြင်ချက်များရှိသည်။ အခြားသူများကိုသူတို့အစားကိုရှောင်ကြဉ်မည်ဟုအချို့သောအမှုအရာရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်ချက်အကြောင်းလူတွေကိုပြောပြရန်အရေးကြီးပါတယ်။
Sectarian Healthcare Directive သင့်ရဲ့ဆန္ဒကိုမဆိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘာသာရေးမူဝါဒများသူတွေကိုပယ်ဖျက်အစားထိုးကြောင်း, သငျမဆိုစက်ရုံသင်သည်သင်၏ကြိုတင်ပြီးညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့ဦးစားပေးလိုကျနာဖို့ငြင်းဆန်လျှင်ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းရှင်းလင်းဖို့ addendum ဖြစ်ပါတယ်။
Hospital Visitation Form လက်မထပ်ရသေးစုံတွဲများဆေးရုံဆုံးမခြင်းကိုခံရသောခွင့်ပြုချက်ပေးသည်။
Assisted Living Facility (ALF) Rider ကူညီ-လူနေမှုအဆောက်အဦမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေများအတွက်စာချုပ်မြင်းစီးသူရဲသည်နှင့်သူတို့သေဆုံးချိန်အထိရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကတစ်ဦးချင်းရဲ့နေအိမ်ဟာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှသင့်တော်ပါတယ်သေချာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး DNR နှင့် POLST သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းကိုဖတ်ပါ။ Visit the national POLST website.
အဆင့် 3: သင့်ရဲ့စကားပြောမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ဒါဟာဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်သင်၏တန်ဖိုးများနှင့်ဆန္ဒကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသောအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာကြိုတင်ညွှန်ကြားချက်ဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်သင်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု proxy ကိုအဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားသူတစ်ဦးဦးရှိသည်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။ သင်နှင့်နီးစပ်သောသူတို့နှင့်အတူသင်တို့၏အကြံအစည်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်သင့်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်အဘို့ကိုမပွောနိုငျသောအခါအသင်တို့အဘို့ပြောဆိုရန်ဆန္ဒရှိသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ဖို့လိုလိမ့်မည်။ ကောင်းစွာအသက်ရှင်ရန်သငျသညျရနျအရေးကွီးသောအရာကိုအကြောင်းကိုယခုသင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှစကားပြောပါ။
Letter to My Doctor အဆုံး-of ဘဝသမားရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းဆကျသှယျကူညီပေးသည်။ လူနာသေချာသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်သိတယ်ကြောင့်အချိန်မနှောင်းမီ၎င်းတို့၏ဆန္ဒကိုလေးစားပါလိမ့်မယ်စေနိုင်သည်။
Patient Notebook စောင့်ရှောက်မှု, ဆေးညွှန်း, ချိန်းနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းကို၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူဆက်သွယ်ဖို့ဆေးဝါးကုသမှုအခက်အခဲများကြုံနေရသူလူတို့အဘို့မှာပြည့်စုံသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Medicare update Medicare လူနာနှင့်အတူကြိုတင်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၏ 30 မိနစ်ဆရာဝန်များ reimbursing အကြောင်းကို။
How to Talk to Your Doctor About Your End-of-Life Options သင့်ရဲ့ဦးစားပေးများနှင့်တန်ဖိုးများကိုနားလည်သဘောပေါက်သင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေး၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြု, သင်အလိုရှိကြသည်တွင်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များကိုဆန္ဒရှိဖြစ်ခြင်း။ အစောပိုင်းသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏တန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီအဆုံးသတ်-of ဘဝအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့ပိုများပါတယ်။
How to InterviewaHospice နာတာရှည်ဆေးရုံအကြားရွေးချယ်ရာတွင်အပေါ်အကြံပေးချက်များပေးထားပါတယ်။ အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းမြောက်မြားစွာနာတာရှည်ဂေဟာပေးသူရှိသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဦးစားပေးများနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုလေးစားတဲ့နာတာရှည်ဂေအင်တာဗျူးနှင့်အရွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်, သင်၏အဆုံး-of ဘဝကိုစောင့်ရှောက်မှုရွေးချယ်မှုချီးမြှောက်မည်။
Understanding your End-of-Life Options အဆုံး-of ဘဝရွေးချယ်မှုများ၏အကွာအဝေးပေါ်အသေးစိတ်ကမ်းအဘို့သွားရောက်ကြည့်ရှု။
Understanding Medical Aid-in-Dying သေအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့သွားရောက်ကြည့်ရှု။
အဆင့် 4: စကားပြောပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်
ကြိုတင်မဲစောင့်ရှောက်မှုစီမံကိန်းရုံတစ်ခုတည်းစကားပြောဆိုမှုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရာအရပ်ကိုကြာတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အချိန်ကိုကျော်သငျ့စိတျကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအပြောင်းအလဲများသည်မှန်လျှင်, သို့မဟုတ်ကြောင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များသင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလုံးဝပုံမှန်ပါ!